အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် အား အကြီးအကျယ် အစားအစာ ရှားပါးမှု ၊ အကြီးအကျယ် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု၊​ အကြီးအကျယ် ငတ်မွတ်မှု သို့မဟုတ် အိုင်ယာလန် အကြီးအကျယ် သေဆုံးပျက်စီးမှု ဟု လည်း ခေါ်ကြပြီး  အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ပြင်ပတွင်မူ အိုင်ယာလန် အာလူး ရှားပါးမှု ဟု ရည်ညွှန်းလေ့ ရှိကြကာ  ၁၈၄၅ ခုနှစ် မှ ၁၈၄၉ ခုနှစ်အတွင်း အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် လူအများအပြား ငတ်မွတ်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ရောဂါဘယများ ဖြစ်ပွားခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သော အချိန်ကာလပင် ဖြစ်သည်။  အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့သော နေရာ များမှာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပြီး အိုင်းရစ်ရှ်ဘာသာစကားကို အသုံးများသော နေရာများလည်း ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်အား အိုင်းရစ်ရှ်ဘာသာစကားဖြင့် ဒရော့ချ်ရှောင်း ဟု သိကြပြီး အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ဘာသာပြန်ပါက ခက်ခဲသော ကာလများ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရကာ စာစကားဖြင့် ဆိုးရွားသော ဘဝ ဟု ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ အဆိုးရွားဆုံးကာလမှာ ၁၈၄၇ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် ၄၇ ဟု သိကြသည်။ ထိုအစာရေစာရှားပါးမှုအတွင်း လူတစ်သန်း သေဆုံးကာ လူတစ်သန်းကျော် အိုင်ယာလန်မှ ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့်  အိုင်ယာလန် လူဦးရေအား ၂၀% မှ ၂၅% အတွင်း ကျဆင်းသွားစေခဲ့သည်။
ပိုးကျထား၍ ပျက်စီးနေသော အာလူးတစ်လုံးကို မြင်ရပုံ
ကပ်ဆိုက်ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ သဘာဝ အကြောင်းတရားဖြစ်ပြီး ၁၈၄၀ ခုနှစ်များတွင် ဥရောပတစ်ခွင်တွင် ကျရောက်ခဲ့သော အာလူးဖျက်ပိုးများကြောင့် ဖြစ်ကာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ပြင်ပတွင်လည်း လူ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဥရောပ၏ နေရာအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားသော ၁၈၄၈ တော်လှန်ရေး၏ မငြိမ်သက်မှု အများအပြားကို ဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သော အကြောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၈၄၆ ခုနှစ်မှစ၍ အာလူးပိုးကျခြင်း၏ သက်ရောက်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေခဲ့သည်မှာ ဗြိတိသျှ ဝစ်ဂ်ပါတီ အစိုးရ၏ ပုဂ္ဂလိက ရောင်းဝယ်မှုများတွင် အစိုးရမှ ကြားဝင်မစွက်ဖက်သည့် လစ်ဇစ်ဖဲ အရင်းရှင်စနစ် ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး မူဝါဒများ ဖြစ်သည်။ ရေရှည်အကြောင်းတရားမှာ မြေရှင်မရှိပဲ မြေဖိုးကောက်ခံသည့်စနစ်  နှင့် သီးနှံတစ်မျိုးတည်းပေါ် မှီခိုစိုက်ပျိုးသည့် ယဉ်ကျေးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၈၀၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၂ ခုနှစ်အထိ ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် အိုင်ယာလန် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် ဝက်မင်စတာမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက် ထိုကပ်ဘေးသည် သမိုင်း အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။  ထိုကပ်ဘေးနှင့် ၎င်း၏ သက်ရောက်မှုများကြောင့် အိုင်ယာလန်ကျွန်း၏ လူဦးရေပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု၊ နိုင်ငံရေး နှင့်ယဉ်ကျေးမှု ရှုမျှော်ခင်းများ ယခင်အနေအထားမှ ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည် ၂ သန်းခန့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကာ ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာ လူဦးရေ လျော့ကျမှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အိုင်ယာလန်နေထိုင်သူများနှင့် အိုင်ယာလန်မှ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ပြန့်ကျဲ ရောက်ရှိသွားသူများအတွက်မူ ထိုကပ်ဘေးသည် သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်း ပြောစရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့သည်။  အိုင်းရစ်စ် အများစုနှင့် အစိုးရကြား နဂိုကတည်းက တင်းမာနေသော ဆက်ဆံရေးသည် ကပ်ဘေးကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီး လူမျိုးရေးနှင့် ခွဲထွက်ရေးဆိုင်ရာ တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ရှိ အိုင်းရစ်ရှ် ရွှေ့ပြောင်းလာသူများနှင့် တခြားနေရာများမှ အိုင်းရစ်ရှ်များတို့တွင် အိုင်းရစ်ရှ် မျိုးချစ်စိတ် နှင့် ရီပတ်ဘလစ်ကင်စိတ်ဓာတ်တို့ကို မြင့်တက်စေခဲ့သည်။ တီဗွီ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးသူ ဂျွန်ပါဆီဗယ်မှ ရှင်းပြသည်မှာ "ကပ်ဘေးဟာ ကာလကြာမြင့်တဲ့ သစ္စာမဲ့မှု နဲ့ ဂုတ်သွေးစုပ်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီကနေတစ်ဆင့် အိုင်ယာလန် လွတ်လပ်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ တိုးပွားလာခဲ့တယ်။" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
↑ C. Kianely, A Death-Dealing Famine: The Great Hunger in Ireland, Pluto Press, 20 Mar 1997, pp. 1-3
↑ Kinealy 1994, p. 5.
↑ O'Neill 2009, p. 1.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Kinealy 1994, p. xv.
↑ The great famine (An Drochshaol). Dúchas.ie
↑ Éamon Ó Cuív, An Gorta Mór – the impact and legacy of the Great Irish Famine
↑ An Fháinleog Chapter 6. "drochshaol, while it can meanahard life, or hard times, also, withacapital letter, hasaspecific, historic meaning: Bliain an Drochshaoil means The Famine Year, particularly 1847; Aimsir an Drochshaoil means the time of the Great Famine (1847–52)."
↑ Ross 2002, p. 226.
↑ Kinealy 1994, p. 357.
↑ Ó Gráda၊ Cormac; Vanhaute၊ Eric; Paping၊ Richard (August 2006)။ The European subsistence crisis of 1845–1850:acomparative perspective (PDF)။ XIV International Economic History Congress of the International Economic History Association, Session 123။ Helsinki။ 2017-04-17 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Woodham-Smith 1991, pp. 410–411.
↑ Donnelly၊ Jim။ "The Irish Famine"၊ BBC History၊ 17 February 2011။
↑ "What Caused the Irish Potato Famine?" (April 1998). The Free Market 16 (4).
↑ Laxton 1997, p. [စာမျက်နှာ လိုအပ်].
↑ Litton 1994, p. [စာမျက်နှာ လိုအပ်].
↑ Póirtéir 1995, p. 19–20.
↑ "Social vulnerability and ecological fragility: building bridges between social and natural sciences using the Irish Potato Famine asacase study" (30 October 2003). Conservation Ecology2(7). Retrieved on 28 May 2019.
↑ "The online atlas of Irish population change 1841–2002: A new resource for analysing national trends and local variations in Irish population dynamics" (2011). Irish Geography 44 (2–3): 215–244. doi:10.1080/00750778.2011.664806. “..population declining dramatically from 8.2 million to 6.5 million between 1841 and 1851 and then declining gradually and almost continuously to 4.5 million in 1961”
↑ "The Vanishing Irish: Ireland’s population from the Great Famine to the Great War." Timothy W. Guinnane lectures in economics at Yale University.
↑ K.H. Connell, The Population of Ireland 1750–1845 (Oxford, 1951).[စာမျက်နှာ လိုအပ်]
↑ T. Guinnane, The Vanishing Irish: Households, Migration, and the Rural Economy in Ireland, 1850–1914 (Princeton, 1997)[စာမျက်နှာ လိုအပ်]
↑ Kinealy 1994, p. 342.
↑ John Percival: Great Famine: Ireland's Potato Famine 1845-51, Diane Publishing Company, 1995
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ_ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်&oldid=537611" မှ ရယူရန်
အိုင်းရစ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
စာမျက်နှာနံပါတ် ရည်ညွန်းချက်များလိုအပ်သော ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများ
အမျိုးမျိုးအပြားပြား expanded collapsed
ပို၍ expanded collapsed
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။